'एक चट्टान र एक कठिन ठाउँ को बीच मा': तारे ले आफ्नो पकेट उठाउने तारे छ? - Potatoes News
'एक चट्टान र एक कडा ठाउँ को बीचमा': तारे ढु्गाले तपाइँको पकेट उठाउँदै छ?
कुनै पनी आलु उत्पादकलाई सोध्नुहोस् कि चट्टानहरु कहाँ छन् र उनीहरु तपाइँलाई कडाईका साथ भन्नेछन्: "मेरो क्षेत्र मा छैन।" जबकि यो साँचो हो, उनीहरु पनि तपाइँको यार्ड मा सम्बन्धित छैनन्। धेरै फसल काट्नेहरु केहि दशक पहिले आलु को खेतहरु को माध्यम बाट आफ्नो बाटो खने पछि, किसानहरु ढु ,्गा, फोहोर र फसल को मलबे लाई फर्केर आफ्नो भण्डारण यार्ड मा ल्याइरहेछन्, तब या त बगैंचा मा ढीलाहरु मा यो छोडेर वा फिर्ता बाहिर खेतमा।
न त विकल्प राम्रो छ: यार्ड स्पेस मूल्यवान छ, र मेशिनरी, ईन्धन र मैन-घण्टा को लागत आज मतलब यो हो कि तपाइँको यार्ड बाट टेर ड्राइभिंग मतलब छैन। उद्योगले प्रतिक्रिया दिएको छ: बर्षको पछिल्लो दुई मा, मोबाइल आलु सफाई उपकरण अब तपाइँ सफा गर्न को लागी अनुमति दिन्छ आलु सही मैदान मा।
अब बाट एक पुस्ता, मलाई लाग्छ कि हामी सबै गैर मोबाइल उपकरणहरु मा फर्केर हेर्नेछौं र हाम्रो टाउको हल्लाउनेछौं कि कसरी अनावश्यक समय खपत मलबे व्यवस्थापन सबै को लागी मोबाइल एकाइहरु मा स्विच गर्नु भन्दा पहिले।
उत्पादकहरु एक राम्रो मोबाइल इकाई सफा गर्न को रूप मा राम्रो संग र कुशलतापूर्वक एक निश्चित स्थान इकाई को रूप मा आशा गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै मामिलामा, वास्तव मा, मोबाइल एकाइहरु एक राम्रो, छिटो काम पुरानो शैली मिसिनहरु भन्दा धेरै कम हात संग गर्न।
जबकि मोबाइल मेसिनहरु एक केहि उच्च अग्रिम लागत बोक्छन्, उनीहरु छोटो क्रम मा त्यो लगानी फिर्ता। सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा स्पष्ट लागत बचत यातायात दक्षता अधिकतम गर्न मा छ।
उत्पादकहरु आलु क्षेत्र बाट भण्डारण यार्ड मा सार्ने श्रम र ट्रक मात्र कन्द सार्ने द्वारा चलाउँछ। प्रोसेसिंग को लागी सीधै शिपिंग उत्पादकहरु सफा गर्न सक्छन् र त्यसपछि मैदान बाट सीधै जहाज, tare को लागी दण्ड को जोखिम बिना नै यार्ड सफाई को अतिरिक्त कदम हटाउन।
यसबाहेक, फोहोर, ढु and्गा र मलबे उनिहरु बाट पैदा भएको क्षेत्र मा रोग, झारपात र कीट प्रदूषण कम गर्न मा मद्दत गर्न सक्छ।
अपरेशन को सजीलो को लागी जब तपाइँको विकल्पहरु लाई विचार गर्नुहोस्: सब भन्दा सजिलो एकाइहरु आज सहज, सबै हाइड्रोलिक्स को टचस्क्रिन नियन्त्रण र एक मान्छे, मा-मिनेट सेट-अप र टेक-डाउन प्रस्ताव। को Lockwood VACS मोबाइल एक अर्ध ट्रेलर प्लेटफर्म मा बनेको छ, जसको मतलब यो राजमार्ग गति मा ढुवानी गर्न सकिन्छ।
आजका उत्पादकहरु लाई कुशल उपकरण को आवश्यकता छ कि कम संग अधिक गर्न सक्छ: उपकरण जसले समय बचाउँछ, अपरेटर थकान कम गर्दछ, र कार्यक्षमता मा सुधार गर्दछ। मँ उद्योग नवाचार को साथ काम गरिरहेको छ कि कदम देखेर खुशी छु।
'स्पड लक': क्विक लोक जापान मा पहिलो दिगो बन्द को परिचय
NPC मेक्सिको मा अमेरिका ताजा आलु प्राप्त गर्न को लागी लडाई मा सम्मेलन अपडेट गर्दछ
उद्योग यूरोप संग स्कटल्याण्ड को बीउ आलु व्यापार पुनः स्थापित गर्न प्रतिबद्ध
अगस्ट 25, 2021
कोल्ड चेन रसद २०२20 सम्ममा २०% भन्दा बढि बढ्ने सम्भावना छ
अमेरिकी फसल मौसमको सुरुमा ट्रकहरूको अभाव
6 सक्छ, 2021
चीन मा जमेको फ्रेन्च फ्राई उत्पादन २० प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ
लक्ष्यमा ट्रान्जिसन योजना राख्नुहोस्
अधिक आलुका लागि सामयिक बजारको लागि खोजी गर्दै
4 वर्ष पहिले